Post Date 2021-11-16 20:59:23
जर्मनीमा प्रि–पिएचडी ट्रेनिङबाट पिएचडीका लागि छनोट हुन सकिनँ। जर्मनीको विश्वस्तरीय न्युरोसाइन्स ल्याबमा रहँदा मलाई कहिल्यै त्यो काम गर्ने उत्साह र ऊर्जा प्राप्त भएन। जर्मनीको निराश बसाइबाट फर्केपछि मेरो निष्कर्ष रह्यो – म विज्ञानका लागि जन्मेकै होइन।
२०६९ साल माघमा गाउँमा श्रीमदभागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ भयो। सप्ताहको दुई दिनअघि गाउँ जाँदा सप्ताह हुने–नहुने अन्योल थियो। पैसाको अभाव थियो, गाउँमा थरिथरि स्वार्थको द्वन्द्व थियो। तर युवाको जोडबलमा सप्ताह भयो। पैसा उठ्यो। सामुदायिक भवन बन्यो। पुस्तकालय बन्यो। चौतारो चिनियो। राधाकृष्ण मन्दिर प्राङ्गण विस्तार भयो। उक्त परिसर वडाको केन्द्रबिन्दु बन्यो। त्यसमा धेरै थोरै योगदान भएको मेरो जीवन पनि बदलियो।
’तिमीले तिमीलाई मनपर्ने काम खोज्यौ भने जीवनमा कहिल्यै काम गर्नुपर्ने छैन’ कन्फ्युसियसको यही विचार अनुसरण गर्दै म लोक सेवा अधिकृतको परीक्षा दिने निर्णयमा पुगेँ। तयारी थालेँ।
असफलताबाट कहिलेकाहीँ अत्यास नलागेको होइन तर मलाई थाहा भयो – जुन काम गर्न अत्यास लाग्छ, त्यो नै गर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त काम हो। जीवनमा सुरूआती पाइला नै सबभन्दा अप्ठ्यारा हुन्छन्। ती पाइला कष्टकर भएनन् भने हिँडिरहेको बाटो गलत हुन सक्छ। त्यसैले गाह्रो हुन्छ। गाह्रो हुनै पर्छ। सजिलो बाटो त जोसुकै हिँड्न सक्छ। जहाजको लागि सजिलो र सुरक्षित त समुद्रको तट नै हुन्छ, तर जहाज त्यसको लागि बनेको हुँदैन। जहाज त जानैपर्छ समुद्रको बीचमा आँधीबेहेरीसँग पौंठेजोरी खेल्न।
यो अवधिमा कुनै विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा नसिकेको कुरा सिकियो। धेरै–थोरै अध्यात्मिक कुरा पनि जानियो। हामीले प्रकृतिको गतिलाई स्वीकार्नु पर्छ,जसको रहस्य हो– धैर्य।
यो विश्वास गर्नुपर्छ कि सही बाटो हिँडेको खण्डमा एउटा अलौकिक शक्तिले हामीलाई डोहो¥याउनेछ। भागवत गीतामा भनिएको छ– तिमी धैर्य गर, जो तिम्रो हो, त्यो तिमीले पाउनेछौ।’
म सँगसँगै अर्को एउटा संस्था पनि बदलिरहेको थियो। म काम गर्ने मेरो कार्यालय– निजामती कर्मचारी अस्पताल। म त्यहाँ काम गर्न रमाउथेँ। आफ्नो कामलाई माया गर्थेँ। तर अस्पताल भने मैले सोचेजस्तो बन्न सकिरहेको थिएन।
कुनै समय राम्रो ख्याति भएको मेरो कार्यालयको सेवा दिनानुदिन खस्किँदै गयो। एक समयको अब्बल कार्य सम्पादन भएका कर्मचारी निरुत्साहित हुँदै गए। कारण थियो – अस्पतालको विनियमावली।
निजामती अस्पतालमा जे भयो त्यो नै यो देशको शासन–प्रशासनको सूक्ष्म प्रतिबिम्ब हो। देशको राज्य संयन्त्र नै सुशासन र विकासभन्दा बढी नागरिकका मौलिक हक अधिकार हननमा बढी उद्धत देखिन्छ। त्यसैले अदालतमा राज्यविरूद्धका मुद्दाका चाङ छन्।
अनि यसरी देशको शासन–प्रशासनबारे पनि बुझियो। जानियो। पढियो।
मेरो कार्यालयको झमेला र देशको अस्तव्यस्तताबीच म अर्को अप्ठ्यारोतिर पनि अघि बढिरहेको थिएँ । मेरो उमेर ३५ पुग्दै थियो– सरकारी सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेरहद। तर असफलताले पछ्याउन छाडेको थिएन। व्यवस्थापकीय काममा मेरो रूचि थियो। आत्मविश्वास भरपुर थियो। परीक्षा राम्रै दिन्थेँ तर पास हुन्नथेँ। अब उमेरले पनि मलाई भिरतिर धकेलिरहेको थियो।
तै पनि म हार मान्नेहरूमा थिइनँ। मेहनत गर्न छाड्नेहरूमा थिइनँ। मलाई थाहा थियो– हाम्रो वर्तमानको परिस्थितिले हामी कहाँ पुग्छौं भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्दैन। यसले फगत हामी कहाँबाट सुरू गर्छौं भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्छ। चुचुरोमा पुग्नेहरू त्यहीँ जन्मेका हुँदैनन्। अनवरत परिश्रमले मात्र त्यहाँ पुग्ने हुन्। त्यसैले अन्तिमसम्मै प्रयास गर्ने दृढता मनमा थियो।
मलाई प्रभावित गर्ने मध्येको अर्को एउटा कथा थियो– कुकुर र हात्तीको। जो राम्रा साथी थिए। दुबै एकैचोटि गर्भवती भए। कुकुरले ३ महिनामा आधी दर्जन छाउरा जन्माई। अर्को तीन महिनामा फेरि अर्को आधा दर्जन छाउरा। अर्को तीन महिनामा फेरि अर्को आधा दर्जन छाउरा। १८ महिनामा ३ दर्जन छाउरा। तर दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि हात्तीको सुरसार छैन। कुकुर दौडेर हात्तीको सामु पुगी र भनी– तिमी साँच्चै गर्भवती छौ त? मेरो त तीन दर्जन बच्चा भइसके। तिम्रो अहिलेसम्म एउटै भएको छैन।
हात्तीले उसलाई भनी– हेर ! जे चिज मेरो पेटमा हुर्किँदै छ, त्यो गज्जबको छ। यो छाउरा हैन, हात्ती हो। जब यो मेरो पेटबाट खस्नेछ, धर्तीले थाहा पाउनेछ। पृथ्वी काँप्नेछ। जब बाटोमा मेरो बच्चा हिँड्नेछ, संसार उसलाई हेर्न झुम्मिनेछ। उसको तारिफ हुनेछ। म हात्ती जन्माउँदै छु, छाउरा हैन। त्यसैले समय लाग्छ। हात्ती जन्माउन राम्रै समय लाग्छ।
यसो भन्न ठूलो हिम्मत चाहिन्छ। भिडमा मिसिन केही आवश्यक पर्दैन, एक्लै उभिन ठूलो हिम्मत चाहिन्छ। समाजको खोक्रो ढर्रा अंगालेको भए मैले पनि भन्ने थिएँ होला– ’यसो ट्राइ मार्देको थिएँ, नामै पो निस्केछ।’
ठूलो डर त त्यस्तो सफलता प्राप्त गर्दा हुनुपर्छ, जसको कुनै अर्थ छैन। असफल हुने स्वतन्त्रताबाट नै सबैभन्दा ठूला–ठूला सफलता प्राप्त भएका छन्। जीवनमा सधैं सिकिरहनुपर्छ। सिक्नलाई कहिल्यै बुढो र नेतृत्व गर्नलाई कहिल्यै जवान भइँदैन।
हाम्रो समाजले परम्परागत रूपमा नै ’हुने बिरूवाको चिल्लो पात’, ’बहुमुखी प्रतिभाको धनी’, ’जीवनमा कहिल्यै दोस्रो नभएको’, ’जता जाँच दियो , त्यतै नाम निकाल्ने’ जस्ता अपवादका कथालाई सफलताको मानक मान्दै आएको छ। तर समाजमा औसतमा मानिसहरू असफल हुन्छन् र प्रयास गर्न छोड्छन्।